Zava-dehibe ny faritra atsimon'i Chile mba hahatakarana ny fiovan'ny toetr'andro | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Ilaina ny faritra atsimon'i Chile mba hahatakarana ny fiovan'ny toetrandro
Araka ny voalaza imbetsaka, misy fiatraikany amin'ny lafivalon'ny tany ny fiovan'ny toetrandro. Amin'ny toerana sasany, noho ny latitude na ny toe-pahasalamany dia misy faritra mora tohina kokoa noho ny fiovan'ny toetr'andro ary ny hafa mahatohitra kokoa.
Ny faritra Shily ao Magallanes sy Antarctica, any amin'ny faritra atsimon'i Amerika, manolotra fepetra miavaka handinihana ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Ity dia zavatra iray izay tokony hanararaotan'ny siansa hahazoana vokatra tsara kokoa sy fahalalana bebe kokoa momba ny hetsika sy ny vokany mety hitranga.
1 Ny faritra atsimo indrindra amin'ny planeta
2 Fiovan'ny toetr'andro sy ny fikarohana ny tontolo iainana an-dranomasina
3 Ireo tontolo iainana an-dranomasina dia tsy maintsy arovana
4 Fanabeazana ny tontolo iainana ho fitaovana vahaolana
Ny faritra atsimo indrindra amin'ny planeta
Any amin'ny 3.000 XNUMX kilometatra atsimon'i Santiago no misy azy ny tanànan'i Punta Arenas. Izy io no ivon'ireo iraka siantifika miasa ao Magellan sy Antarctica. Izy io no faritra atsimo indrindra amin'ny planeta ary mahatratra fahamatorana tsara ka lasa andry siantifika subantarctic sy Antarctic.
Fiovan'ny toetr'andro sy ny fikarohana ny tontolo iainana an-dranomasina
Ny fanaovana ireo faritra ireo ho andry siantifika sy teknolojia manerantany dia mamaly ny zava-misy fa ny fiovaovan'ny toetr'andro ankehitriny dia misy fiatraikany amin'ny faritry ny Ivotoeran'ny fikarohana mavitrika momba ny tontolo iainana marin-tany latitude (IDEAL).
Ny fanaovana fanadihadiana sy famakafakana amin'ity faritra ity amin'ny fomba fijery siantifika dia ahafahana mahazo fampahalalana sarobidy be dia be mifandraika amin'ny fiovana rehetra mitranga noho ny fiovan'ny toetrandro. Anisan'ny fanadihadiana natao teto amin'ity faritra ity ny fikarohana ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Ny fitomboan'ny maripana, ny fatran'ny CO2 betsaka amin'ny atmosfera, dia miteraka fiatraikany amin'ny ranomasina. Ohatra, hitantsika ny fanalefahana haran-dranomasina, ny fanamorana rano ary ny fanimbana ny toeram-ponenan'ireo karazan-biby izay mora tohina kokoa amin'ny fiovan'ny tontolo iainana.
indrindra Ny faritra marefo indrindra dia ireo izay tsy maintsy dinihina amin'ny an-tsipiriany kokoa, satria izy ireo no manome fampahalalana betsaka indrindra momba ny fomba mety hisy fiatraikany amin'ny karazan'olona monina eo. Noho ny valiny lehibe kokoa amin'ny fanovana ny tontolo iainana, fanandramana sy fanandramana bebe kokoa no azo atao hahazoana fahalalana bebe kokoa momba ny vokany
Ireo tontolo iainana an-dranomasina dia tsy maintsy arovana
Ny fananana valiny tsara amin'ny andrana amin'ireo faritra ireo dia ahafahan'ny manampahefana mandray fanapahan-kevitra sasany izay afaka miaro ny tontolo iainana an-dranomasina. Raha manana fahalalana tsy dia misy marina momba ny vokatra mety hitranga amin'ny karazana iray isika dia afaka mandray fepetra hiarovana ireo karazana ireo.
Ohatra iray amin'izany rehetra izany ny fihemorana glasy amin'ny fjords sasany ao amin'ilay faritra. Io vokany io dia mahatonga ny rano madio ao amin'ny faritra hetaheta hiditra amin'ny tontolo an-dranomasina ary hanova ny toetra simika sy biolojika. Ireo karazan-javamaniry mila fitanana sira mba hiainana, dia tsy ho afaka hanohitra ireo fanovana ireo ary ho faty.
Satria sarotra ny miverina amin'ny olan'ny fiovan'ny toetrandro, Ny tokony hatao sisa dia ny mitady vahaolana amin'ireo olana miseho. Vahaolana azo tanterahina izay manampy amin'ny fampifanarahana ny tontolo iainana an-dranomasina amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Fanabeazana ny tontolo iainana ho fitaovana vahaolana
Ny fanabeazana ny ankizy handray andraikitra amin'ny tontolo iainana dia fitaovana iray hahafahana mamaha ny olan'ny tontolo iainana azo avy amin'ny fiovan'ny toetrandro. Tokony holazaina fa, raha manazatra olona afaka manao fikarohana, mamakafaka ary mandray fanapahan-kevitra manohana ny tontolo iainana isika, Hampiroborobo ny fanentanana manerantany ny fanajana ny tontolo iainana isika. Izany rehetra izany dia handray anjara amin'ny fomba tsara kokoa hanamaivanana ny vokadratsin'ny fiovan'ny toetrandro.
Raha tiantsika hiditra amin'ny siansa ny tanora dia mila fanabeazana momba ny tontolo iainana isika. Ny zava-misy fa i Shily dia manana rafitra Antarctic sy subantarctic mety any amin'ny faritra atsimo hanaovana fikarohana dia mety hitarika amin'ny fisian'ny loharanon-karena avy amin'ny firenen-kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena, toa ny fandinihana ny astronoma any avaratry ny firenena. Amin'izao fotoana izao, ny Ivotoerana fikarohana momba ny tontolo iainana maridrefy Latitude avo (IDEAL) dia iray amin'ireo fikambanana siantifika miasa ao amin'io faritra io, miaraka amin'ny ekipa mpikaroka 25 avy amin'ny andrim-panjakana samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fiovan'ny toe-trandro » Ilaina ny faritra atsimon'i Chile mba hahatakarana ny fiovan'ny toetrandro
Nahita planeta fito afaka mitahiry fiainana i NASA
Ny ranomandry any amin'ny tendrontany avaratra dia mahatratra ambany ny isan'ny janoary